Kuthiwani ngamasheya eRepsol emakethe yamasheya? | Ezezimali Zomnotho
Abaninimasheya benkampani kawoyela iRepsol impela bakhathazekile ngesimo samanje samasheya abo, ngoba baqinisekisile ukuthi esikhathini esifushane ukulinganisa kwabo kwehle ngaphezu kuka-25%. Ngoba impela, Intengo yayo isihambile ngonyaka we-2015 isuka ekuhwebeni cishe ngama-euro angama-19, kuze kube manje ibiza ama-euro ayi-11. Kunama-euro amaningi aseduzane kwendlela, kepha into ekhathaza kakhulu uma njengamanje ungumninimasheya ukuthi ukulahlekelwa kungaba kubi kakhulu ezinyangeni ezizayo.
I-Repsol ingenye yezokuphepha okuhamba phambili kwenkomba yokukhetha yaseSpain, iba ngenye yamashipsi amahlanu aluhlaza okwesibhakabhaka ahlanganiswe ne-Ibex 35. Futhi lokho ibonakala ngokungenye yezokuphepha ezinenye yezinzuzo ezinkulu kakhulu emakethe yamasheya yaseSpain. Ngenzuzo ecishe ibe yi-8%, eyenziwe ngezinkokhelo ezimbili zonyaka, eziqoqwa ezinyangeni zikaJuni nangoDisemba. Ngaphandle kokungabaza, izaba ezinhle zokuhlala kunani. Kodwa ingabe ukuphela kwaso?
Ngonyaka wezimali ka-2015, amasheya enkampani kawoyela yaseSpain abephakathi kwalabo abathinteke kakhulu emakethe, ngenxa yokwehla kwamanani entengo yezinto zokusetshenziswa eziyinhloko ezimakethe zomhlaba. Ubudlova bokuwa kwayo abumangazanga abanikazi bamasheya bayo kuphela, kodwa futhi nengxenye enhle yabahlaziyi bemakethe yamasheya, lapho abaningi babo bebeze bahlanganiswe nakwiphothifoliyo yabo yezokuphepha enconyelwe kakhulu amaklayenti.
1 Izizathu zokuwa kwayo emakethe yamasheya
2 Yini ongayenza njengamanje?
3 Izinkinobho eziyisithupha zokuchaza isikhundla sakho
Izizathu zokuwa kwayo emakethe yamasheya
Le nqubo ecacile ye-bearish inkampani ebikade iyithuthukisa ezinyangeni ezedlule ayinayo into ejwayelekile yokuyichaza, kepha kunalokho inezinhlobo ezehlukile. Kumele zihlaziywe, hhayi kuphela ukuthola isu lamanje okufanele ulenze, ubekwe kunani, kepha futhi uma kungakha ithuba elicacile lokuthenga labaninimasheya abasha abafisa ukusizakala ngamanani aphansi lapho amasheya abo ehweba khona njengamanje.
Ukuncika kukawoyela: ukuvela kwamanani ayo kuhlotshaniswa kakhulu nalawoyela ongahluziwe. Futhi ngalo mqondo, kuhambisane nokufakwa kuhlu kwayo cishe njalo. Le nto eluhlaza isukile ekuhwebeni i-100 iye kuma-dollar ayi-35 ngomgqomo, ngesikhathi esifushane kakhulu. Futhi kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, kugcine kuthinte inkampani kazwelonke kawoyela. Akumangalisi ukuthi wonke umkhakha ujeziswe kanzima phakathi nale nqubo, noma ngabe kukhona ukulungiswa okunamandla kwezinye izinkampani zomhlaba wonke ezilahlekelwe yi-50% ezinyangeni ezimbalwa. Ngokombono wabahlaziyi, inqobo nje uma kungeke kutholakale emananini entengo engahluziwe, ngeke kube khona kungenzeka ukuthi kube khona uhlobo oluthile lokuphindaphinda entengo yamasheya kaRepspol. Futhi ukuthi ngokusho kwemininingwane yakamuva eyenziwa yilomkhakha, akubonakali sengathi kuzoba umkhuba wawo, okungenani esikhathini esifushane.
Thenga i-Talisman: ukuthengwa kwenkampani kawoyela yaseCanada, manje onyakeni nje owedlule, kuhlawulise ngokweqile amathemba okukhula kwenkampani. Isizathu sicace bha, Lo msebenzi wenziwa ngentengo kawoyela ezungeze ama-dollar ayi-100, kanti manje ibiza kakhulu, ikakhulukazi ama-40, ngaphansi kwengxenye yezinyanga eziyishumi nambili ezedlule. Njengomphumela wentengo ebekwe izimakethe zezezimali, lo msebenzi awuzange ube nenzuzo, futhi abatshalizimali baya ngokuya behamba benkampanini beyofuna amanye amathuba ebhizinisi, ikakhulukazi kweminye imikhakha yemakethe yamasheya.
Downtrend: isimo sayo sobuchwepheshe asikwazi ukuba ngaphezulu kwe-bearish, ikakhulukazi esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside. Kusukela maphakathi no-2015 ithuthukise umqansa obheke phansi owakhuphula waya kumanani entengo awo amanje. Le nqubo yokuhweba yaholela ezenzweni zabo kuze kube ukusekelwa okubalulekile kwama-euro angama-10, lapho okwamanje kubonakala sengathi kukhuthazelele ukuwa kwayo. Kodwa-ke, uma bonke abahlaziyi bezimakethe bevumelana ngokuthile, ngukuthi uma weqa le mikhawulo, ukululama kwakho kuzoba nzima kakhulu ukwenzeka. Ngaphezu kwalokho, babikezela ukwehla okuthe xaxa okungathatha ama-euro angama-7 noma ama-8 ngesabelo ngasinye. Kepha noma kunjalo, zizolungiswa ngokuvela komgqomo wamafutha. Abanye ochwepheshe bezimakethe banethemba elikhulu ngenani futhi babikezela ukuthi intengo yalo ingayiyisa kumanani azungeze ama-euro ayi-14, lapho kutholakala khona enye yezindlela zayo eziphikisayo.
Ukwehliswa kwezingcaphuno: Okunye okuguqukayo okuphikisana naleli nani lomkhakha kawoyela ukuthi abathengisi ababaluleke kakhulu nabalamuli bezezimali behlise kakhulu intengo ebabekiwe. Kusuka kusilinganiso sama-euro angama-20 kuye kwayi-14 ngesabelo ngasinye. Izobe isenendlela eya phezulu, kepha kuningi kakhulu. Yize into ebaluleke kakhulu ukuthi akekho kubo owengeze izinhloso zabo zohlu. Ngalo mbono, aziziningi izimali zokutshala imali ezisuse inkampani kumaphothifoliyo ezokuphepha, kulimaza ezinye izinkampani ezivunyelwe izimakethe zezimali, futhi ezinamathuba amakhulu okubuyekeza.
Yini ongayenza njengamanje?
Endabeni yenkampani eguquguqukayo njengale, futhi umkhuba wayo wesikhathi esifushane ongachazwa kahle, ambalwa amasu angenziwa. Izinzuzo abangazithola zikhulu kakhulu, kepha ukulahleka nakho. Ngakho-ke ingozi efihlekile yokuthatha izikhundla, okungenani kuze kube yilapho indlela amanani abo azoyithatha icacile.
Ngesikhathi sokugcina sokuhweba, inkambo yayo emakethe eqhubekayo yasekhaya ngokuqinisekile ibingahambi kahle. Ngokushesha lapho iphakama i-2% ngesikhathi sokuhweba, njengoba ngosuku olulandelayo yawa ngamandla afanayo. Kunamafuphi, ukuthambekela okucacile. Kuyafaneleka kuphela uma ungumthengisi, ofuna ukwenza imisebenzi yakho izuze esikhathini esifanayo sokuhweba, ngaphandle kokubheka imigomo emide.
Futhi ngokujwayelekile ngokuziphendukela kwemvelo okuphansi kunalokho okwenziwe inkomba kazwelonke ekhethiwe. Kusukela kulesi sigaba, kukhona ezinye izinketho ezeluleka kakhulu uma ufuna ukukhiqiza inzuzo yesikhashana esikhathini esifushane, nakuzo zonke izinhlaka. Isivuno saso sokwahlukaniswa okuphezulu kuphela esingadlala njengempahla ukusenza sibe nesifiso esisheshayo sezintshisekelo zakho, futhi kuze kucaciswe isimo saso sokugcina.
Ngokusobala amasheya eRepsol abengomunye wabalahlekelwe kakhulu ngo-2015, futhi ezinyangeni ezimbalwa ezizayo kuzodingeka ukubona ukuthi bayazithola yini izikhundla, noma uma kunalokho, amanani abo alandela inkambiso ekhonjisiwe kuze kube manje, nokuwa okunzima athuthukile qhubeka.
Kunoma yikuphi, Esikhathini samanje semakethe yamasheya uzohlala uthola izinkampani ezinesici esingcono sobuchwepheshe, esakha amaphethini we-bullish anamandla ngamanani abo. Amanye awo acwiliswe kwisibalo esingahlulwa sokwenyuka kwamahhala. Okululeke kakhulu ukuthenga emakethe yamasheya, futhi lokho kungaholela ekutholeni inzuzo enkulu emisebenzini obhekene nayo kwizimali ezinyangeni ezimbalwa ezizayo.
Izinkinobho eziyisithupha zokuchaza isikhundla sakho
Uma ufuna ukuthola imbuyiselo ethile ngamasheya ale nkampani, ngeke ube nokhetho ngaphandle kokungenisa uchungechunge lwamathiphu, azokusiza ukufeza izinhloso zakho. Hhayi ngaphandle kobunzima kukho konke ukusebenza kwakho, futhi ikakhulukazi ngokuya ngezimo ezivela kusukela manje.
Enye into okufanele uyihlole ukwenza lo msebenzi ngempumelelo yisikhathi sokutshala kwakho imali. Uma kuzoba okwesikhashana, ungasebenzisa ukusikeka okungenzeka ngamanani abo ukuzama ukuthola ama-euro ambalwa ekuhambeni ngakunye. Uma imibono yakho, ngakolunye uhlangothi, ingeyesikhathi esiphakathi noma eside, amasu azoshintsha ngokuphawulekayo. Hhayi ize, okufanele kakhulu kulezi zimo ukwenza ukuthengwa kwamasheya kube semthethweni lapho ukuthambekela kwayo kokuhamba isikhathi eside sekuguqukile, kuya phambili kusuka ku-bearish.
Khona manje Uhweba ngaphansi kwesiteshi sohlangothi esijule kakhulu, phakathi kuka-11 no-12,50 euros, lapho kunzima khona ukuphuma kuye. Isu lokutshala imali, ngokusho kwabahlaziyi abakhulu bezimakethe zamasheya, belizosuselwa ekuthengeni amasheya uma kwephula ukumelana, futhi ngokuphambene nalokho, ukuwathengisa ngokushesha uma ekugcineni kunqunywa ukushiya isiteshi ngengxenye yaso ye-bearish.
Ukukusiza ukuthi uhambise imisebenzi yakho ngenani, sikudalula izeluleko ezithile ezilula zokuthi umsebenzi wakho kufanele ube kanjani, kepha ikakhulukazi lapho kufanele ubheke khona ukungena noma ukuphuma emakethe yezimali ngamasheya ale nkampani emkhakheni kawoyela. Ngenhloso yokusetha iphothifoliyo yakho yezokuphepha ukubhekana nonyaka wezimali we-2016.
Uma isikhathi sakho sokuhlala side, uzoba nesivuno esicishe sibe ngu-8% kwizabelo minyaka yonke, okuzokusiza ukuthi ujabulele imali engenayo engaguquki kokuguqukayo, futhi ubhekane nezindleko ezithile zomuntu siqu.
Uma kwenzeka ulingeka ukuba ufake inani, kufanele uye kumashadi wamanani kawoyela, engxenyeni enkulu okuzoba yiyo ekugcineni enquma ukuvela kwezenzo zakho ezimakethe zamasheya.
Cishe ufuna ukubekwa enkampanini ezolile, ngaphandle kokushintshashintsha ngokweqile kuzintengo zabo. Lapho-ke kuzoba nenzuzo enkulu kuwe ukukhetha amanye amanani we-cutoff wokuzivikela ukuthi azikwenzi ube usuku lonke kusalindwe isilinganiso sabo.
Ukuvikela imali oyongile ungayifaka kuphothifoliyo yakho kanye nezinye izinkampani ezifakwe ohlwini olunolaka oluncane, futhi inani eliphansi lomsebenzi aliphakeme ngokweqile.
Inokuxhaswa okuqinile kuma-euro angama-10, ukuze kuthi uma kuyiphula, kube ngcono ukuqeda izikhundla zayo, futhi uma ungakatshalwa imali, into enengqondo kunazo zonke ukulinda umzuzu ongcono wokungena emakethe.
Kumele ucabangele izinga eliphezulu lesikweletu le nkampani enayo, futhi lokho nakanjani kuzoba yisithiyo esikhulu ekuthuthukiseni ukunyakaza okuqinile okuzoyiyisa kuma-maximum ayeyimakile eminyakeni eyedlule.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Kuthiwani ngamasheya eRepsol emakethe yamasheya?
I-Repsol idabula abaninimasheya, kufanele sikubike